မင်းလှမြို့ နယ်ရှိ ထန်းကိုင်းရေနံမှော်၌ ငါးနာရီကျော်ကြာ မီးလောင် - Yangon Media Group
မင်းလှမြို့ နယ်ရှိ ထန်းကိုင်းရေနံမှော်၌ ငါးနာရီကျော်ကြာ မီးလောင်
မင်းလှမြို့နယ်ရှိ ထန်းကိုင်းရေနံမှော်၌ ငါးနာရီ ကျော်ကြာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းလှ မြို့နယ်၊ ထန်းကိုင်းကျေးရွာအနီး မြောက်ဘက် ငါးမိုင်ခန့်အကွာ ထန်း ကိုင်းရေနံမှော်တွင် မတ် ၂၂ရက်၊ နံနက် ၆နာရီခန့်မှစတင်ကာ ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကျော်မိုး၏ ရေနံလက်ယက်တွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းအရ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးငြှိမ်း သတ်ယာဉ်ကိုးစီးဖြင့် ထွက်ခွာငြှိမ်း သတ်ခဲ့ပြီး အချိန် ၅နာရီခွဲအကြာ နံနက် ၁၁နာရီခွဲခန့်၌ မီးငြိမ်းကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ် ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ရသည့်အ ကြောင်းရင်းမှာ ရေနံလျှံထွက်နေ စဉ် ရေနံခပ်ခွက်နှင့် သံပိုက်ပွတ်တိုက်ထိမိရာမှ မီးပွင့်ကာမီးလောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မီးလောင်မှုကို Foam အမြုပ်မီးသတ်ဆေးရည်များဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ မင်းလှမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးဝေဖြိုးအောင်က ”ထန်းကိုင်း ရေနံမှော်ထဲက လက်ယက်တွင်းမှာပဲ မီးလောင်တာ။ ရေနံကလည်း လျှံထွက်တာဆိုတော့ မီးတောက်ကလည်းကြီးတယ်။ ထွက်တဲ့ရေနံ ပိုက်ကပဲမီးလောင်တာ။ Foam ဆေးရည်နဲ့ ငြှိမ်းသတ်ရတယ်။ ထိ ခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့ မရှိခဲ့ဘူး” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မီးလောင်မှုသည် ယခုမတ်လအတွင်း ထန်းကိုင်းရေနံမှော်၌ တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်။ ယင်းမီးလောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မင်းလှမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၁၁၅/ ၂ဝ၁၉၊ မီးနှင့်သို့တည်းမဟုတ် မီး လောင်လွယ်သော အရာဝတ္ထုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါ့လျော့ခြင်း ပုဒ်မ၂၈၅ ဖြင့် ဦးအောင်ကျော်မိုးကို အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်။
တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ခေတ္တဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလ?
မွန်ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်း ရာသီအတွက် အထူးတင်ဒါ ပိုက်ချက်များ ပထမအကြိမ် အိတ်ဖွင့်ရောင်းချရာ လ??
သင်္ကြန် နေရပ်ပြန်မည့် နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်မှတ်လိုအပ်ချက်ယာဉ်လိုင်းကော်မတီမှ တေ??
ငမိုးရိပ်ချောင်း အတွင်း ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် တစ်စီး အရှိန်လွန်ထိုးကျ နစ်မြုပ် လူတစ်ဦးနှင့်ယာဉ်
အန္တရာယ်ရှိသည့် ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရား၊ စေတီပုထိုးများပေါ်ကို မတက်ရောက်နိုင်ရန် ပိုမို ကြပ်မတ?